Wholesale Tine "Chakavanzika Pakunaka Kwakakura" kukuudza iwe fekitori uye vagadziri | SMOORE
Tine "Chakavanzika Chekunaka Kwakanyanya" kukuudza
Kufambidzana kumashure ku2018 nepo FEELM tekinoroji brand yakatanga kuvambwa, "For Next Pod" yakakurudzirwa senge sirogani yechiratidzo. Kupa premium mhando uye ruzivo, iyo inotevera pod inotungamirwa neFEELM tekinoroji yaive sarudzo dziri nani kune vanoshandisa mabhiriyoni pasirese.
kubva ipapo, isu takatora mainjiniya eR & D uye tikashandisa sainzi yakakosha senge zvinhu, hydromechanics, aerodynamics uye thermodynamics kuvaka nyika-inotungamira atomization technology chikuva.
Mazuva ano, iwe unogona kuwana yakavharwa pods ine FEELM zvedongo coil pasi rese. Vedu vatinoshanda navo vanobata 70% uye 30% misika yemusika zvakateedzana muChina neAmerica musika. Asi isu hatimborega kuongorora zvinodiwa nevatengi. Chii chavanonyanya kuda? Ndezvipi zvavanotarisa? Isu tinokwanisa here kugutsa zvavanoda nekufambira mberi muhunyanzvi?
Chikamu 1 Chii chatakawana?
Pakutanga kwa2020, FEELM yakatangisa ongororo yepasirese uye ndokuunganidza zviuru zvemashizha ekupindura. Zvichakadaro isu takadzidza mijenya yehunyanzvi yekuongorora mishumo uye maonero.
Uye isu takasvika pamhedziso yekuti vatengi 'yekupedzisira vaping kutsvaga kuravira.
Kubvira pakavharwa pods dzakatakurwa neFEELM tekinoroji yakavhurwa kutanga kwegore ra2018, isu takaramba tichiunganidza mhinduro kubva kumakumi ezviuru evashandisi vekupedzisira. Zvichibva pakuwongorora kwakasiyana-siyana uye kuenzanisa, tinoona kuti vanofarira pods inotyairwa neFEELM ceramic coils pamusoro pemamwe michina yekudziya tekinoroji, kunyanya mumatanho ane chekuita nekuravira kwakadai sekutsetseka, kuvuza, nicotine kuendesa kugona uye kuenderana.
Part 2 Vakati chii?
Mhinduro kubva kumakumi ezviuru zvevatengi inoratidza kuti mukana mukuru wezvigadzirwa neFEELM mukati unonaka kwazvo. Ipo chakavanzika chakavanzika chekuravira kukuru chiri muFEELM Ceramic Coil.
Chikamu 3 Chakavanzika chekuravira kukuru
Kuchenesa tekinoroji kunoita kuti hupenyu hwedu huve nani uye FEELM inoita vaping kuravira zvirinani.
Nhasi, FEELM inotsanangudza zvakare hunyanzvi hwekudziya, inosangana neyekucheka-tekinoroji uye inogara nhaka mweya wehungwaru. Kubva kwekutanga coil kusvika kubirionth, FEELM inoenderana nehupamhi hwepamusoro, ichiendesa yakasarudzika vaping ruzivo kune nyika yese.
FEELM Ceramic Coil, Chakavanzika cheKuru kuravira.
Hatimborega Kuongorora Chakavanzika Chakavanzika.
Kusvuta Imwe nzira, E Liquid Vapor Midzanga, Newport E Midzanga, Midzanga Yekupisa, E Midzanga Blister Pack, Epen,